KORONAA IRRA PPtu NUTTI HAMMAATE!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKORONAA IRRA PPtu NUTTI HAMMAATE!!!
# KORONAA IRRA PPtu NUTTI HAMMAATE #
Yeroo ammaa kana mootummoonni addunyaa humnaa fi beekumsa qaban mara fayyadamanii diina waloo Koronaa jedhamurratti bobba’anii lammiiwwan ofii du’a irraa oolchuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Biyyi tokko garuu haala adda ta’een xiyyeeffannoon addunyaa waan biraa irra ta’uusaatti fayyadamtee, lammiiwwan ishee irratti duula bantee jirti. Biyyi kun Itiyoophiyaa jedhamti.
Itiyoophiyaan dhaaba nafxanyaa pp jedhamuun bulaa jirtu Koronaa vaayiresii sababeeffachuudhaan LYA baafattee lammiiwwan ishee keessumaa uummata Oromoo reebaa , hidhaa, dararaa , ajjeesaa, mana isaa gubaa , qe’ee isaarraa buqqisaa jirti.
Eega dhukkubni kun argame jedhamee kan vaayiresichi ajjeeserra kan hidhattoota mootummaan ajjeefamanitu caala. Wallaggaa fi Gujii keessatti dargaggoo ajjeesuun dhowwaa hin qabu; jaarsolii reebuu fi salphisuun qaanii miti ; dirqisiisanii waan fedhan fudhachuun mirga.
LYA Koronaaf bahe Aanaa Gobbuu Sayyoo , Midaa Qanyii fi Meettaa Walqixxee keessatti namni hanga fedhe kutaa dhiphoo keessatti yoo hidhame hin dhowwu; loon isaanii yoo rasaasaan tumaman hin gaafatu.
LYA Koronaaf bahe Gimbii fi Cirootti doktorota dabalatee ogeeyyiin fayyaa akka hidhaman ni deggera; Hidhabuu Abooteetti manni jireenyaa qotee-bulaa akka gubatu ni jajjabeessa.
Alaabaa mallattoo qabsoo Oromoo ta’e bakka fedhetti ciruu, gubuu, fi salphisuun nama hin gaafachiisu. Walumaa galatti haalii amma uummanni keenya keessa jiru, waan kana caalaa obsa namaa kennu hin fakkaatu. Labsii yeroo atattamaa keessa waan jirruuf waan feene hojjechuu dandeenya jechuun kan deemsisu miti.
Kaleessas mirga keenyaaf qabsoofne; qabsoo wareegama qaaliin asiin geenye gantootni nu keessaa bahan firii isaa akka salphaatti fuudhanii wayita ormaa kennan argaa jirra; amma garuu morma nu gahee jira. Humni tokkummaa Oroomoo kaleessaa har’as ni jira; kutannoon kaleessaa har’as akka jiru shakkamuu hin qabu. Salphina baachuun nu ga’ee jira.
Dhumarratti poolisii fi humna addaa Oromiyaatiif dhaamsa qabna. Isin ilmaan qunqurfamaati ; ergamni keessan fedha paartii tokkoo bakkaan gahuu osoo hin taane mirga saba keessanii fi heera mootummaa naannoo Oromiyaa kabachiisuudha. Kanaaf, harka keessan uummata cunqurfamaa irraa deebifadhaa. Waan isin hojjechaa jirtan tartiibbaan galmaahaa jira.
Qeerroon Oromoo wareegama guddaa kafaltee, gantootaan akka girrisaatti lakkaawamtee, qoor-qalbiinkee akka cabuu fi tokkummaan kee akka laaffatuuf shirri qindaawaan sirratti gaggeeffamaa jiru, yoomiyyuu caalaa haala naannookee jiru dammaqinaan akka hordoftu si yaadachiifna. Seer-dhablummaa fi dhiittaa mirga namummaa bakka hundatti mul’ataa jirus akkuma kaleessaa ragaaleen deggartanii akka gabaastan isin gaafanna!
Koronaa fi hokkara irraa of eeggadhaa !
ባሁኑ ወቅት ብዙ ዜጎቻችን እስር ቤት እንደሚገኙ ይታወቃል:: አሁንም እየተጨመሩበት ነው:: ነገር ግን እንደዚህ ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት ከፍተኛ ሆኖ ሳለ: የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም የወጣው ደንብ የእስረኞችን ጉዳይ ዘንግቶታል::
The WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus says that although there are some encouraging signs in some countries,